दूराचारको अभियोगमा अमेरिकी नागरिक पक्राउ
March 31, 2021 Desk 1
पोखरा, बालयौन दूराचारको अभियोगमा पोखरा महानगरपालिका–१८ सेदीस्थित विष्णु होमस्टेबाट अमेरिकाको क्यालिफोर्निया ठेगाना भएका राहदानी नम्बर ५६६९९२३०७ बाहक माइकल नोरम्यान टेलोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सन् २०१९ मा ३ जना बालबालिकालाई बालयौन दूराचार गरेको भन्ने पीडित बालक एवं अभिभावकबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी प्राप्त भएपछि उनलाई प्रहरी […]
बझाङका जनताले चामल खान पाउने कहिले ? नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले बझाङका जनतामा चामलको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । आज (बुधवार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै बझाङ जिल्ला साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना बोहोराले संघीय सरकारका मन्त्रालय देखि विभिन्न निकायमा स्थानीय नागरिकलाई चामल खुवाउन पाउँ […]
‘ममाथि शारीरिक हमला हुन सक्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बोलीबारे विपक्षी सांसदले मागे जवाफ
काठमाडाैं, आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति प्रतिपक्षी दलले सदनमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशको सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । ‘सम्माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो […]
अभिनेता एजाज खान ला,गू औषध मुद्दामा प,क्राउ
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता एजाज खान लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । उनलाई हिजो (मंगलवार) साँझ मुम्बई एयरपोर्टबाट पक्राउ गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोले उनलाई लागूऔषध मुद्दामा ८ घण्टासम्म सोधपुछ गरेपछि गिरफ्तार गरेको हो । उनी पक्राउ परेपछि ब्यूरोले मुम्बईका दुई स्थानमा छापा […]
मा,दक पदार्थको बेचविखनमा प्रतिबन्ध
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकामा इस्टर होलिडेका क्रममा मादक पदार्थको बेच विखनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनले मंगलबार राति गर्नुभएको सम्बोधनका क्रममा सो जानकारी गराएका हुन्। दक्षिण अफ्रिकामा पनि पछिल्लो समयमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो रुपमा रहेको […]
अनुहार चम्काउन मानिसले निकै रकम खर्च गर्छन् । व्युटी पार्लर, चिकित्सक लगायतका धाउँदा धाउँदा पनि अनुहारमा चमक आउँदैन । तर कतिपय यस्ता सामाग्री र प्रयोगहरुलेपनि मानिसका छालामा प्रतिकुल असर पर्ने गरेका छन् । तर साइड इफेक्ट नहुने गरि घरमै पनि सौन्दर्यका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । जसले अनुहार […]
काठमाडाैं, तपाईं आँखाको दृष्टि बढाउनका लागि उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ? आँखा कमजोर छन् भने त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि सरल र प्राकृतिक अभ्यासको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंले चश्मा प्रयोग नगरिकनै दृष्टि बढाउन सक्नुहुन्छ । खासमा कुनै मांसपेशी प्रयोग गरिएन भने त्यो कमजोर हुँदै जान्छ […]
नयाँ सरकार बनाउन ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने देउवाको सर्त
काठमाण्डौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार भेट भएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने नैतिक दबाबमा रहेका दाहालले सत्ता समीकरणका लागि छलफल गर्न देउवासँग भेटेका हुन् । देउवासँगको भेटमा दाहालले पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए । उनले ओलीको विकल्पमा देउवाको नेतृत्वमा […]
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी, बन्ला वैकल्पिक सरकार ?
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी संसद् बैठकअगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १८ गते बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली छिट्टै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा छन्। त्यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बैठकअघि नै समर्थन […]
वामपन्थी नेता मानन्धरको पशुपति आर्यघा,टमा अ,न्त्यष्टि
काठमाडौं । वरिष्ठ वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । मानन्धरको ९१ वर्षको उमेरमा हिजो (सोमवार) साँझ निधन भएको हो । उनको अन्त्येष्टि आज (मंगलवार) पशुपति आर्यघाटमा गरिएको छ । नेता मानन्धरलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका […]
काठमाडौं,तपाईंले पक्कै पनि इनार देख्नुभएको छ होला । कतिले इनारबाट पानी पनि झिकेको हुनुपर्छ । आजकाल धेरैको घरमा नै इनार बनाइन्छ । आफ्नै घरमा नदेखेपनि अन्यत्र देख्नुभएको हुनसक्छ । तर तपाईंले हालसम्म जति पनि इनार देख्नुभएको छ, त्यो सबै गोलो आकारको देख्नुभएको होला । चारकुने इनार सायदै बनाइन्छन् […]
अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्दै कार्यकर्तालाई ओलीले दिए यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकर्तालाई जुनसुकै बेला निर्वाचनमा जान तयार रहन निर्देशन दिएका छन् । चैत १३ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा अध्यक्ष ओलीले जुनसुकै बेला निर्वाचनमा जान तयार रहनेगरी क्रियाशील हुन निर्देशन दिएका हुन् । अन्तरपार्टी निर्देशनमा ओलीले भनेका छन्, ‘संसदको […]
ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि बोतल प्रहार गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । धनुषामा प्रहरी कर्मचारीमाथि बोतल प्रहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। ड्युटीमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीमाथि बोतल प्रहार गरेको अभियोगमा धनुषा लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका-६ निकाल बस्ने ३० वर्षीय सन्तोष शर्मालाई सोमवार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-६ सखुवा चोकमा ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर धनुषाबाट ट्राफिक सहित खटिएको […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले आफू पक्षका नेताहरुको भेला बोलाएको छ । सोमवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट निलम्बन गरेसँगै त्यसबारे छलफलका लागि उक्त पक्षले भेला बोलाएको होे । पार्टी विधान विपरित […]